I-YotaPhone isaphila kakhulu, sikubonisa iinkcukacha zesizukulwana sesithathu | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka embalwa edlulileyo i-YotaPhone yeza kwintengiso, i-terminal enezikrini ezimbini, i-LCD yangaphambili kunye ne-inki yangasemva ye-elektroniki. Ukuba siyeka ukucinga, umbono wawulungile kakhulu, kodwa ixabiso lawo lalingekho. Kwaye nditsho ukuba umbono wawulunge kakhulu, ngakumbi kwabo bantu basebenzisa umxholo omkhulu nge-smartphone, ngokucacileyo befunda umxholo, njengeeblogi, iincwadi, amanqaku kunye neminye apho imibala yesibini. Ukusetyenziswa kwescreen se-inki ye-elektroniki, ukongeza ekungonakaliseni umbono xa sisenza kwiimeko eziphantsi zokukhanya, Kuthetha ukonga ibhetri ebalulekileyo kwesi sixhobo.
Ukuba ukusetyenziswa kwesiqhelo okwenzayo kwi-smartphone yakho ngu-Facebook, i-Instagram kunye nezinye, ayenzi ngqiqweni ukuba uqwalasele i-terminal yolu hlobo. Ngaphandle kwempumelelo yomxholo ebenayo, umenzi uyaqhubeka nokuthemba esi sixhobo kwaye sele eza kusungula isizukulwana sesithathu, iYotaPhone 3, isiphelo sendlela ngeli xesha sinexabiso eliphakathi, Inxalenye ye- $ 350 yenguqulo engama-64GB kunye ne- $ 450 yenguqulo ye-128GB.
Ngaphakathi kweYotaPhone 3 sifumana I-Snapdragon 625 8-core, ene-Adreno 506 GPU kunye ne-4 GB ye-RAM. Esona sixhobo siphambili sohlobo lwe-AMOLED, sinesisombululo se-intshi ye-1080 kunye ne-5,5. Isikrini se-e-ink sinesisombululo see-intshi ezingama-720 kunye no-5,2, ngaphezulu kokutya umxholo ngaphandle kokukhathazeka ngobomi bebhetri, obunobungakanani be-3.200 mAh.
Njengazo zonke iinguqulelo ezidlulileyo, iYotaPhone 3, iya kulawulwa yi-Android, kodwa asilazi inani lohlobo eliza kuba lilo, kodwa kuthathelwa ingqalelo unyaka okhoyo, kufanele ukuba ube ngowesixhenxe, ukuba bafuna ukuphumelela imvume yabasebenzisi abanomdla kwisiphelo sezi mpawu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-YotaPhone isaphila kakhulu, sikubonisa iinkcukacha zesizukulwana sesithathu